State Counsellor receives Special Advisor to Japanese Prime Minister – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor of the Republic of the Union of Myanmar, received Mr. Hiroto IZUMI, Special Advisor to the Prime Minister of Japan, at 10 am on 21st March 2019 at the Ministry of Foreign Affairs, Nay Pyi Taw.
During the meeting, they discussed matters related to Yangon Urban Development Projects which are being implemented with Japanese Official Development Assistance, production of silk in Kayin State with Japanese technical assistance and the continued provision of humanitarian and development assistances of Japan in Rakhine State.
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ဂျပန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်၏ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
(၂၁-၃-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဂျပန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်၏ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ ဟီရိုတို အိဇုမိအား နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ၂၁-၃-၂၀၁၉ ရက်၊ ၁၀၀၀ နာရီ အချိန်တွင် လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ တရားဝင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကူအညီဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ရန်ကုန်မြို့ပြ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းများကိစ္စ၊ ဂျပန်နိုင်ငံအကူအညီဖြင့် ကရင်ပြည်နယ်တွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ပိုးထည် ထုတ်လုပ်ခြင်းကိစ္စ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း လူသားချင်း စာနာ ထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီများ ပေးအပ်သွားရေးကိစ္စနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အကူအညီများ ဆက်လက်ပေးအပ်သွားရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။